Inqubo Yokuthuthukisa - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Kusukela ngo-1990 i-YALIS Design ibikhiqiza izibambo zeminyango emafektri ayo e-China lapho yonke inqubo yokukhiqiza yenzeka khona.I-YALIS Design ibilokhu iletha izibambo zeminyango ephezulu emazweni ahlukahlukene.Besisabalalisa umqondo womkhiqizo we-YALIS futhi ithuthukisa imikhiqizo yayo, igcina ijubane lemakethe ukuze ihlangabezane nezidingo zamakhasimende.Izingxenyekazi zesimanje zomnyango eziklanywe eShayina futhi zenziwa ezindinganisweni eziphakeme kakhulu zaseShayina ukuze zidayiswe emhlabeni wonke.
Kusukela ngo-1990, i-YALIS Design iye yahlakulela iziteshi zendawo zokusabalalisa izingxenyekazi zehadiwe eShangdong nasezifundazweni ezizungezile eChina.
Ngo-2008, uhlobo lwe-YALIS lusungulwe.Sibeke imikhiqizo esezingeni eliphezulu ngenhloso yesixazululo sehardware yomnyango.
Kusukela ngo-2009, i-YALIS yathola isitifiketi sesistimu yokuphatha ikhwalithi ye-ISO9001, isitifiketi se-SGS, isitifiketi se-TUV nesitifiketi se-EN.
Ngo-2014, isekelwe e-Italy edumile, i-YALIS yaqala ukuklama isibambo somnyango we-zinc alloy ngesitayela sesimanje.
Ngo-2015, i-YALIS yaqala ukusungula nokuhlakulela iqembu le-R&D.I-YALIS yengeze ngokusemthethweni izibambo ze-zinc alloy njengomugqa womkhiqizo omusha.
Ngo-2016, izibambo zeminyango yomklamo wokuqala we-YALIS 10 zethulwa emakethe futhi zathola ilungelo lobunikazi.Futhi i-YALIS ibhekwe ukuthuthukisa ukwakheka okusha kokuhlanganisa nokuhlakaza kalula.
Ngo-2017, ngenxa yeqoqo lokuqala lezibambo zeminyango yomklamo wokuqala zaziswa emakethe, ngakho-ke i-YALIS yethula iqoqo lesibili lezibambo zeminyango emisha emakethe.Ngaleso sikhathi, u-YALIS wenze umzamo omusha ekwakhiweni kwesibambo somnyango: I-YALIS izamile ukuhlanganisa okokufaka kanye nokuqedwa okuhlukile kusibambo somnyango.
Ngo-2018, izibambo zezicabha ezimnyama ezicwebezelayo, isibambo sesicabha sesikhumba, i-rosette eyisicaba ngogqinsi ongu-5mm kanye nesibambo somnyango ngaphandle kwe-rosette, le misebenzi yezandla emi-4 ize emakethe.Ngaso leso sikhathi, i-YALIS yaqala ukusabalalisa uhlobo lwayo eYurophu.
Ngo-2019, i-YALIS yazi ngoshintsho emakethe, ngakho-ke yethula izixazululo ze-hardware zomnyango zokukhiqiza iminyango, okuhlanganisa isisombululo somnyango wengilazi ozimele, isisombululo somnyango wokhuni, isixazululo se-aluminium ifreyimu yokhuni kanye nesixazululo somnyango wegumbi lezingane.
Ngo-2020, Ukuze kuthuthukiswe umthamo wokukhiqiza kanye nekhwalithi yomkhiqizo, i-workshop yokukhiqiza ye-YALIS yethule uhlelo lokuphatha lwe-ISO kanye nemishini ehlukahlukene yokukhiqiza ezenzakalelayo, njengemishini yokupholisha okuzenzakalelayo,I-Computer Numerical Control ( CNC ) umshini, imishini yokufaka ukufa okuzenzakalelayo, imishini yokupakisha ezenzakalelayo nokunye.